"What3words" inogona kuita kuti kuendesa 30% kunyatsoshanda | ECommerce nhau
"What3words" inogona kuita kuti 30% isununguke
"What3words" iyo webhusaiti ine chinangwa chekurerutsa kero, iyo yavanowana nekushandisa geo-coding system kushambadzira nzvimbo vachishandisa resolution yemamita matatu. Chinoita kuti saiti iyi ive yakasarudzika mashandisiro emazwi matatu kuti usvike padyo padyo pane zvaunoda, izvi ndizvo zvinosiyanisa webhusaiti iyi nevamwe kune yakasarudzika system yayo geo-coding. Iyi webhusaiti ine nharembozha dzinowanikwa Apple uye Android.
Makambani akatsaurirwa mapasuru anokwanisa kuwedzera kugona kwekuendesa kwavo ne30% kana vakashandisa "What3words". Neichi chishandiso haupinde kero nenzira yakajairika, asi zvinoitwa neichi chishandiso kutsvaga maateri nekubatanidza mazwi matatu akasiyana.
"What3words" yakahwina mibairo yakadai se "Game Changer" uye "Rising Star" pamutambo wee-commerce mibairo gore rapfuura. Iyi sisitimu yakaratidzirwa kuve yakashandiswa nemanomwe eposvo masevhisi kubva gore rapfuura.
Muedzo uchangobva kuitwa muLondon, kambani yekuendesa "Quiqup" yakakwanisa kudzikisa makumi matatu muzana yenguva yayo yekuendesa ichishandisa iyi 30-izwi system. Uye munzvimbo dzakaita seCaribbean chitsuwa cheSint Marteen, kambani yezvikafu zvinokurumidza "Dominos" yanga ichiedza sisitimu imwecheteyo yekuendesa kwavo kumba.
"What3words " yakavambwa kuGreat Britain muna 2013. Iyi kero system yavakagadzira yakakamura nyika kuita 57 trillion 3 nemamita matatu emakwere, nzvimbo yega yega ine musanganiswa wakasarudzika wemazwi matatu aya. Izvi zvinoreva kuti zvese uye chikamu chimwe nechimwe chine kero yakapusa iri nyore kwazvo kurangarira. Iyi sisitimu iripo parizvino mumitauro gumi nemana uye iri kushandiswa munyika dzinopfuura zana nemakumi masere.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » "What3words" inogona kuita kuti 30% isununguke
87% yeBritain vakatumira kana kugamuchira mapasuru muna 2017
Electronic Retailing Association inobatana EMOTA